Ny singa fanamainam-baovaon'ny rivotra sy ny mpanamboatra varotra planeta
Mpanamboatra boaty fanoratana rivotra
Gearbox fandefasana herinaratra avo ny rivotra Turbine
Ny boaty kely iray dia ampiasaina matetika ao amin'ny turbine-drivotra hampiakatra ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana avy amin'ny rotoroa ambany ka mankany amin'ny mpanamboatra herinaratra haingam-pandeha ambony kokoa.
Mianara momba anay
Nandritra ny am-polony taona maro izay dia nanamboatra boaty sy turbine-turbine namboarina manokana izahay, mila fampitomboana ny hafainganam-pandehan'ny rivotra amin'ny alàlan'ny am-polony ary mamindra izany any amin'ny mpamokatra herinaratra.
Amin'ny maha-mpamatsy boaty kitapo feno ho an'ny fampiharana angovo rivotra, dia manana traikefa multi-megawatt ho an'ny Wind Turbine Gearbox Technology & Innovation isika, miaraka amin'ny gears carburized dia avo lenta amin'ny famolavolana boaty, hanatsarana ny fahamendrehan'ny boaty turbine rivotra.
Miaraka amin'ny traikefa an-taonany famokarana, afaka mamorona boaty fitehirizana isika araka ny filan'ny mpividy.Izahay dia iray amin'ireo orinasa vitsy manana fahaiza-manao fikarohana sy fampivoarana. Ny valiny mavitrika momba ny singa amin'ny turbine rivotra dia manao fanadihadiana amin'ny alàlan'ny fampiasana isa.
Manana traikefa an-taonany maro izahay, ekipa R&D tena tsara, ary eo ihany koa ny serivisy aorianay amin'ny varotra.
Ny torolàlana vaovao dia mampanantena ireo boaty fanatanjahanan-drivotra azo atokisana, ny vahaolana teknolojia matanjaka Sogears dia manampy amin'ny fanovana ny rafitry ny angovo manerantany, ny famolavolana boaty turbine amin'ny rivotra miaraka amin'ny tabataba. tokana / multistage, planeta, helika, hafainganam-pandeha mitaingina. Ny fanamafisana ny angovo azo amin'ny angovo sy ny fahatokisana ny sanda tsara indrindra. Manamboatra boaty turbine amin'ny turbine amin'ny habaka 55 kW, 250 kW ary 500 kW izahay amin'ny fiaraha-miasa ara-teknika.
Amin'ny maha-mpamatsy vahaolana vahaolana sy serivisy ao amin'ny Wind Turbine Gearbox Manufacturing, dia manome izahay manerana an'izao tontolo izao, ao anatin'izany i Shina, India, Etazonia, Eropa, miaraka amin'ny Gearbox Mill Olo-mena, Sambo-tsofina avoakan'ny rivotra.
Fampahalalana mifangaro ampiasaina amin'ny rafitry ny herin-drivotra
Manome vokatra avo lenta sy ambany vidy izahay. Ny turbine rivotra kely amin'ny haavon'ny kW ny angovo manamarina dia tsy mila ny fampiasana kitay. Ny boaty fanamboarana rivotra iray dia manana anjara toerana amin'ny fampitomboana ny hafainganan'ny turbine rivotra amin'ny alàlan'ny am-polony ary mamindra izany amin'ny mpamokatra herinaratra.
Tiako ny boaty goavam-be kokoa
Tsy dia zava-dehibe loatra amin'ny fikolokoloana araka ny tokony ho izy ny hahalala bebe kokoa momba ny karazana boaty turbin-drivotra sy ny fananganana azy. Ny hery avy amin'ny fihodinan'ny rotor turbine rivotra dia alefa any amin'ny generator amin'ny alàlan'ny maotera mandeha. Ny boaty mpampita rivotra dia manana anjara amin'ny fampitomboana ny hafainganam-pandehan'ny turbin-drivotra am-polony ary ampitaina amin'ny mpamokatra herinaratra.
Andao hiresaka izao!
Raha manana ny vokatra tianao, andao hifandray aminay! Vonona izahay ary miandry ny fiaraha-miasa avy amintsika. Raisintsika ho toy ny tombotsoantsika ary ny vidiny ambany indrindra dia ny fahatsoram-po.
Tontosa ny Gearbox ankehitriny
Manome lanja ny tsirairay amin'ny fanontanianao izahay